10 Tilmaamaha Safarka ee Dalxiiska Joogtada ah ee ugu Fiican | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 10 Tilmaamaha Safarka ee Dalxiiska Joogtada ah ee ugu Fiican
Isbeddelka ugu kulul ee warshadaha safarka ayaa ah bey'ada saaxiibtinimo safarka. Tani waxay khuseysaa socdaalka sidoo kale, kuwaas oo xiiso u leh dib u bixinta bulshada, oo aan kaliya ku mashquulin fasax aan loo baahnayn. Haddii aad tahay musaafir caqli badan markaa safarka dalxiis ee waarayaa fikrad shisheeye kuguma aha.
Waa maxay dalxiis waara? sidee doorkaaga uga qaadan kartaa dhowrista iyo dhismaha bulshada deegaanka? Waxaad ka heli doontaa kuweenna 10 talooyinka safarka dalxiiska ee waara oo caqli gal ah oo fudud in la raaco.
tip 1: Socdaal Dalxiis oo Waara
Safarka tareen, baska ama doontu waa ka jawi wanaagsan yihiin diyaaradda. Wasakhowga hawada ee tareenadu keenaan aad ayuu uga yaryahay kan kale gaadiidka dadweynaha ama gaari gaar loo leeyahay.
Maaddaama masaafada u dhexeysa inta badan waddamada Yurub ay aad u yar yihiin, safarka tareenka ee wadammada oo dhan ayaa fursad weyn kuu ah adiga inaad ku raaxaysato aragtida, oo noqo qof socdaal caqli badan. Sidaa darteed, safarka tareenka waa meesha ugu sareysa ee ajandayaasha safarka waara iyo midkeena 10 talooyinka safarka ee ugu fiican.
tip 2 Socdaal Dalxiis oo Waara: Keydinta Tamarta
Mid ka mid ah faa'iidooyinka safarka, oo dalxiis noqoshadaada ayaa ku koolkoolisa wax walba. Dalxiisayaasha qaarkood, tan waxaa ka mid noqon kara u noolaanshaha sida boqortooyada markii la joogo fasaxa. Si kastaba ha ahaatee, habkan socdaalku wuxuu qaali ku noqon doonaa meeraheenna. Hadaad rabto inaad noqoto musaafir caqli badan, waxaad ku bilaabi kartaa adigoo keydsada tamarta iyo korontada. Sidaa darteed, mid ka mid ah kuwa ugu sareeya 10 talooyinka safarka dalxiis ee ugu fiican ayaa ah in had iyo jeer laydhka shido, AC, iyo TVga oo hawada ka maqan, markaad ka baxdo qolka.
tip 3: Baaskiil Cagaaran
Tilmaam kale oo safar dalxiis oo waara ayaa khuseeya ilaalinta dabeecadda, waxaadna kubilaabi kartaa inaad ku ekaato dariiqyada calaamadeysan. Jidka calaamadeysan ayaa halkaa ku haysa kheyraadka dabiiciga ah iyo layaabka yurub ka badbaado waxyeello. Sidoo kale, habkan ma kala goyn doontid dugaag kasta ama nidaamka deegaanka ee fauna.
La Rochelle ilaa Qiimaha Tareenka Nantes
Toulouse ilaa Qiimaha Tareenka La Rochelle
Bordeaux ilaa Qiimaha Tareenka La Rochelle
Paris ilaa Qiimaha Tareenka La Rochelle
tip 4 Socdaal Dalxiis oo Waara: Nadiifi
Boorso yar oo aad qashinka u soo qaadatid waa tusaale kale oo la yaab leh oo ku saabsan safarka bey'ada-saaxiibtinimada leh. Tusaale ahaan, waxaad u isticmaali kartaa boorsadan inaad ku soo ururiso qashin kasta oo socotada kale looga tagay. Sidaas, waxaad ku biirin doontaa haynta waxyaabaha yaabka leh ee ugu quruxda badan Yurub nadiif ah oo ammaan ah.
tip 5: Dukaan Deegaanka
Wax ka iibsiga gudaha iyo badeecadaha gacanta lagu sameeyo ayaa tusaale layaableh u ah dalxiiska joogtada ah. Halkii ay gacan ka geysan lahayd waxyeelada ka dhalatay geeddi-socodka soo dejinta alaabada, waxaad wax ku darsaneysaa bulshada deegaanka. Dukaameysiga farsamooyinka maxalliga ah iyo badeecadaha ayaa waxtar bulsho iyo dhaqaaleba u leh bulshada deegaanka. Ka dib oo dhan, maalgashiga dhaqanka waa qeyb weyn oo kamid ah dalxiiska waara.
tip 6: Xirmo Boorso La Isticmaali Karo
In kasta oo ay jirto isbeddel adduun oo ah bacaha wax lagu iibiyo ee waara oo dib loo cusboonaysiin karo, weli waxaad isku arki kartaa adiga oo wata bac balaastik ah. Dhamaanteen waan ognahay waxyeelada dammaanad qaadka ah ee hal bac ay sababi karto haddii xayawaan helo ama waxyeelada deegaanka ee mustaqbalka fog. Bacda dib loo isticmaali karo waxay ku fiican tahay ka adeegashada suuqyada maxalliga ah iyo dukaamada waaweyn. Waa fikrad aad u fiican in la xirxiro boorso dib loo isticmaali karo oo laaban karo xusuusta oo dhan.
tip 7 Socdaal Dalxiis oo Waara: Cun Gudaha
Taageerida ganacsiyada maxalliga ah waa qeyb ka mid ah noqoshada caqli iyo mas'uul mas'uul ah. Waxaad marti ku tahay dal shisheeye iyo dhaqan, waana in markasta aad ixtiraam iyo mahadnaq u muujiso bulshada deegaanka. Tani waxay yeelan doontaa saameyn ballaaran oo dhaqaale iyo deegaan.
Intaas waxaa sii dheer, cuntada waa fursad layaableh oo wax lagu barto ku saabsan cuntada deegaanka. Sheekooyinka, uunsi, suxuunta ayaa kuu sheegi doonta wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato dhaqanka deegaanka.
Qiimaha Lyon ilaa Geneva Qiimaha
Bern ilaa Qiimaha Tareenka
tip 8: Xidhmo Koob Coffee ah oo La Isticmaali Karo
Mid ka mid ah waayo-aragnimada ugu fiican markaad safreyso ayaa hubaal ah inaad iibsaneyso keega iyo kafeega maxalliga ah, oo ka bilaaba maalinta aragti weyn. Si kastaba ha ahaatee, hadaad ka fikirto dhamaan socotada kale oo ku dhaqmaya isku dhaqan, ugu dhakhsaha badan adduunyadu waxay ka buuxsami doontaa koobab caag ah. Sidaas, xirxirida dhalo biyo oo dib loo isticmaali karo iyo koob kafee ah micnaheedu waa inaad bedesho caadooyinkaaga, laakiin ka fikir inta ay caawin doonto yareynta qashinka caagga ah.
tip 9: Xulo Dalxiisyada Diirada Leh Ilaalinta iyo Hawlaha Bannaanka
Fasaxaaga fasaxa dibada, kaymaha iyo buuralayda Yurub waa mid ka mid ah meelaha ugu sarreeya 10 talooyin safar dalxiis oo waara.
Gelinta ilaalinta deegaanka ee ilaalineysa duurjoogta ayaa ah cunsur muhiim u ah dalxiiska waara. Ururradan daryeelka waxay badiyaa badbaadiyaan xayawaanka halista ku jira, geedo beero, waxayna door muhiim ah ka ciyaaraan ilaalinta nidaamka deegaanka. Sidaa darteed, fasaxaaga Yurub wuxuu yeelan doonaa qiime dheeraad ah, marka lagu daro helitaanka cajaa'ibka dabiiciga ah, keyd, iyo jardiinooyinka qaran ee Yurub.
tip 10: Xulo Hoyga Isboorti-u-habboonaanta
Kuwani waa noocyo hoyga badan oo cajiib ah Yurub, iyo habka ugu wanaagsan ee loogu raaxeysan karo waxyaabaha cajiibka ah ee dabiiciga ah waa iyadoo dhowr talaabo laga fogaado. Guryo yaryar oo madax-bannaan, guryaha, iyo hoteelada daryeelka ayaa badanaaba shaqaaleysiin doona dadka deegaanka, lana taageero bulshada deegaanka.
Intaa waxaa dheer, ilaalinta duurjoogta waxay bixisaa safarro iyo barnaamijyo iskaa wax u qabso ah oo lagu beddelo hoy. Sayidka, waxaad nasiib badnaan u yeelan doontaa inaad ku raaxeysato duurjoogta ugu quruxda badan iyo keydka dabiiciga.
Nooca hoyga ee aad u doorato fasaxaaga Yurub wuxuu fure u yahay inaad buuxiso doorkaaga socdaal caqli badan. Inaanad ku samayn cilmi-baaristaada ku saabsan hoyga ugu fiican ayaa ka mid ah khaladaadka safarka si looga fogaado.
Safarka tareenka waa hab fiican si ay u bilaabaan aad deegaanka-saaxiibtinimo safar guud ahaan ilaalinta Yurub iyo views. halkan at Save A tareenka, waxaan ku farxi doonnaa inaan kaa caawinno qorsheynta safar jimicsi saaxiibtinimo oo Yurub ku tagaya tareen.
Ma rabtaa inaad ku dhajiso bartayada "10 Talooyin Socdaal Dalxiis oo Waara" bartaada? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsustainable-tourism-travel-tips%2F%3Flang%3Dso የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
EcoFriendlyTravel ecofriendlyvacation Greentourism greentransportport naturalwonderseurope nooca reserveureurope Sustainabletourism SustainabletravelEurope